I-17 Scholarships e-USA Yabafundi base-Afrika 2022
Ukufunda Kwelinye Izwe NgeScholarship
I-17 Scholarships e-USA Yabafundi base-Afrika
Kwangathi 21, 2022 Eze James
Lesi sihloko sihlanganisa uhlu yazo zonke izifundiso zase-USA zabaFundi base-Afrika. Okufanele ukwenze ukuthola ukuthi ngubani ofaneleka kuye bese udubula isibhamu sakho. Futhi-ke, asikho isidingo sokukutshela ukuthi kufanele ungilandele eduze njengoba sithatha uhambo.
Kuyiqiniso elaziwayo ukuthi ukufunda e-USA kukunikeza isitifiketi esikubeka endaweni ephakeme kunawo wonke emhlabeni. Kodwa-ke, njengomfundi wase-Afrika, i izindleko zokufunda phesheya akuwona umdlalo wengane, khuluma kakhulu ezweni elingelinye lamazwe athuthukile anentuthuko kwezobuchwepheshe, isayensi, umkhathi, nokuhlola uwoyela, uma sibala ezimbalwa.
Lokhu kwenza abanye abantu bakhetha amanyuvesi aku-inthanethi e-USA ezidinga inani elincane. Ngeshwa, abanye babhajwe kulwembu lwe amanyuvesi angamanga aku-inthanethi e-USA ecabanga ukuthi ingokoqobo.
Uhulumeni wase-USA, emzamweni wokukusiza, manje unikeza izibonelelo, ukuyekwa, nosekelo lwezezimali olufana imifundaze yabafundi bamazwe aphesheya e-USA, futhi inikeza amanyuvesi omphakathi anemifundaze e-USA. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi ukwazi ukufunda ngaphandle kwengcindezi ngaphandle kokucabanga ukuthi imali yokufunda noma yokuhlala izovelaphi.
Ukuthi ufuna funda ubunjiniyela e-USA ngomfundaze noma uthole eyakho iziqu ze-master's emanyuvesi amahhala e-USA, kukhona ikolishi lakho. Odinga ukukwenza ukuthola labo ohlangabezane nokufaneleka kwabo bese ucindezela inkinobho yohlelo lokusebenza.
Manje, kubalulekile ukuqaphela ukuthi akuzona zonke izifundi zase-USA zabafundi base-Afrika ezixhaswa ngokugcwele. Abanye bavele bakhokhe imali yokufunda, kuyilapho ubhekelela izincwadi zokufunda, kodwa kukho konke, uqinisekiswa ngemfundo esezingeni ngenani elishibhile. Bheka isihloko sethu ku- amakolishi omphakathi ashibhile e-USA abafundi bamazwe aphesheya.
Izifundiso e-USA zabafundi base-Afrika ziza emikhakheni eminingi. Njengoba nje kukhona abathweswe iziqu, abaphezulu, kanye nePh.D. imifundaze iyatholakala, kukhona futhi izifundo zebhola lezinyawo e-USA.
Ngaphandle kokuchitha isikhathi, ake sibheke ngokushesha leyo mifundaze e-USA yabafundi base-Afrika. Kodwa ngaphambi kwalokho, ngiyazi ukuthi unemibuzo ekukhathazayo. Nami ake ngenze ubulungiswa kulokho ngokuphazima kweso. Bheka lezi imifundaze ephezulu yokuthi ama-Afrika ayofunda phesheya.
Izidingo Zabafundi Base-Afrika Ukuze Bafunde E-USA
I-Scholarships e-USA Yabafundi base-Afrika
1. Uhlelo lwe-MasterCard Foundation Scholars e-Wellesley College
2. I-International Cultural Service Programme (ICSP) Izifundo Zemifundaze EYunivesithi Yase-Oregon
3. I-Illinois Wesleyan University International Student Scholarships
4. Uhlelo Lwezazi Zomhlaba Wonke Ku-Clark University Scholarships
5. I-International Guest Scholarships Yabafundi Bezokwelapha Ekolishi LaseMelika Lodokotela Abahlinzayo
6. Uhlelo Lwabafundi Be-Fulbright Lwangaphandle
7. Uhlelo lwe-MasterCard Foundation Scholars Enyuvesi yaseDuke
8. Uhlelo lwe-MasterCard Foundation Scholars e-Michigan State University (MSU)
9. I-Zawadi Africa Education Fund I-Undergraduate Scholarship Yabesifazane- Ngokubambisana Ne-Google
10. I-Haramble Fletcher Scholarships Yabafundi Base-Afrika e-USA
11. I-Boustany Foundation- Izinhlelo ze-MBA Harvard Scholarship
12. I-PEO International Peace Scholarship Yabesifazane- USA naseCanada
13. I-Immigration Journalism Fellowship E-USA Yabafundi Bamazwe Ngamazwe
14. I-Gus Archie Undergraduate Scholarships- Society Of Petroleum Engineers (SPE) Foundation
15. I-Google Lime Scholarship Yabafundi Abakhubazekile Ukuze Bafunde E-USA noma E-Canada
16. Uhlelo Lwe-inthanethi Lokufundiswa Kwe-inthanethi OlweBhange Lase-US- USA
17. I-American University Merit Scholarships
I-Scholarships E-USA Yabafundi Base-Afrika - FAQs
Ingabe Abafundi Bamazwe Ngamazwe Bangathola Izifundo Ezixhaswe Ngokugcwele Ukuze Bafunde E-US?
Singakanani Isikolo Se-SAT Esidingekayo Ukuze Uthole I-Scholarship Egcwele E-US?
Nazi izidingo zabafundi base-Afrika abazofunda e-USA. Kuhlanganisa;
Kufanele ube nesitifiketi sediploma yesikole samabanga aphezulu
Kufanele ube nemibhalo yakho yesikole samabanga aphezulu kanye nemibhalo esemthethweni.
Kufanele uthathe futhi ube nezikolo zokuhlola ku-SAT noma ACT.
Kufanele wenze izivivinyo zolwazi lwesiNgisi ezifana ne-TOEFL, IELTS, iTEP, PTE, njll.
Kumele bhala futhi uhambise izindatshana zakho.
Kufanele ube nezincwadi zokuncoma.
Kufanele ube namakhophi epasipoti yakho esebenzayo
Kufanele ube nobufakazi bokusekelwa ngezimali (okudingekayo kumafomu l- 20)
Ngezansi uhlu lwemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika. Ngilindele ukuthi ugibele nami. Kweminye imifundaze, izikhathi zokugcina kumele ngabe sezidlulile, kodwa ziqaphele uma kwenzeka uzofaka isicelo esikhathini esizayo njengoba imifundaze inikezwa minyaka yonke.
I-MasterCard Foundation Scholars Programme e-Wellesley College ingenye yezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika eyenza abafundi bathole ukuchayeka okubanzi futhi bathole ulwazi olujulile, amakhono, nolwazi oludingekayo ukuze bachume emhlabeni jikelele.
Lo mfundaze udala indawo yokwelulekwa, amathuba okufundela umsebenzi wabafundi abathola iziqu, kanye nokwelulekwa kwabesifazane base-Afrika. Le mfundaze ingeyabafundi abathola iziqu.
Ukufaka isicelo, sebenzisa isixhumanisi esinikezwe ngezansi
Umfundaze wohlelo lwenkonzo yamasiko wamazwe ngamazwe ungomunye wemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika eklomelisa abafundi bamazwe ngamazwe imifundaze minyaka yonke ngokusekelwe ezidingweni zezezimali, ukufaneleka kwezemfundo, njll.
Umfundaze wamukela indlela abafundi abangenza ngayo izethulo mayelana nezinhlangano zabo zomphakathi kanye namazwe asekhaya eqenjini elibanzi labantu, futhi ekugcineni, babe ngumklomelo womfundaze. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi kufanele ube umfundi wamanje wamazwe omhlaba we-UO ngaphambi kokufaka isicelo.
Imali yokufunda icishe ibe ngama- $9000- $27,000, futhi lokhu kuvuselelwa njalo ngonyaka. Le mfundaze ingeyabafundi abathola iziqu.
I-Illinois Wesleyan University International Student Scholarships iphakathi kwemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika egxile ekunikezeni usizo lwezezimali kubafundi bamazwe ngamazwe ukufaneleka kwabo kuhlolwa ukusebenza kwabo ezifundweni kanye namaphuzu okuhlolwa ezivivinyweni zokungena.
Lo mfundaze ongavuselelwa cishe iminyaka emine unenani eliphakathi kuka-$10,000 no-$25,000 ngonyaka, futhi kukhona nokutholakala kwemali mboleko yabafundi kanye nokuqashwa kwekhampasi ukusiza ngokuqhubekayo.
Abafundi ababili abavelele kwezemfundo, amathalente, kanye nezintshisakalo bangakwazi futhi ukuklonyeliswa ngemifundaze kamongameli yezifundo ezigcwele eza njalo ngemva kweminyaka emibili futhi ingavuselelwa iminyaka emine yokufunda. Le mfundaze ingeyabafundi abathola iziqu.
Lo mfundaze ungomunye wemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika ehlinzekwa yiClark University yabafundi abangahlali e-United States unomphela noma abanobunikazi bokuba yisakhamuzi. Iyatholakala futhi kulabo abanesakhamuzi sase-US noma ukuhlala unomphela, kodwa abafisi ukufunda ezindaweni ezimaphakathi nezwe.
Inani le-scholarship lilinganiselwa ku-$ 15,000 ngonyaka, isamba semali engu-$ 60,000, kanye ne-stipend ye-$ 2500 ye-internship kanye nocwaningo ngesikhathi sasehlobo. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi umfundaze ungayekwa lapho uhluleka ukuhlangabezana nezindinganiso zemfundo zokuvuselelwa. Lesi sifundo sitholakala kubafundi be-undergraduate.
Ukufaka isicelo, sebenzisa isixhumanisi esingezansi
I-International Guest Scholarships For Medical Students At American College Of Surgeons iphakathi kwemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika eklomelisa odokotela abahlinzayo abaqeqeshiwe abanamarekhodi okusebenza okuphezulu ocwaningweni nasekufundiseni.
Lo mfundaze otholakala kubo bonke odokotela abahlinzayo abanekhono bamazwe ngamazwe unikeza indawo yemisebenzi yomtholampilo nokucwaninga eNyakatho Melika kanye nokuzibandakanya namathuba emfundo e-American College of Surgeons Clinical Congress. Lo mfundaze owabafundi abaneziqu.
I-Foreign Fulbright Student Programme ingenye yemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika ehlose ukusiza abafundi ukuthi baphishekele iziqu zabo zenkosi noma i-Ph.D. Iziqu emikhakheni efana ne-interdisciplinary ngaphandle kwezinhlelo zeziqu zezokwelapha noma ucwaningo lwezokwelapha lomtholampilo.
Umfundaze uwumfundaze oxhaswa ngokugcwele ohlanganisa imali yokufunda, indawo yokuhlala, izincwadi zokufunda, umshwalense wezempilo, njll. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi umnqamulajuqu wale mfundaze uyahlukahluka kuye ngezwe lakini.
I-MasterCard Foundation Scholars Programme eDuke University ingenye yezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika abahlose ukufundisa abafundi be-35 (amakilasi ayi-7 anabafundi abayi-5 ngalinye) abavela e-Afrika eseningizimu ye-Sahara ukuze babe nakho konke okudingekayo ukuze bathole imifundaze e-USA. eminyakeni eyishumi ezayo.
Inani elivela kwa-MasterCard Foundation lingama- $13.5 wezigidi, kanti lolu hlelo luyatholakala kubafundi abenza iziqu.
I-MasterCard Foundation Scholars Programme eMichigan State University iphakathi kwemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika esekela izitshudeni ze-masters kanye neziqu ze-undergraduate ezivela e-sub-Saharan Africa.
Umfundaze uwubudlelwane phakathi kwe-MasterCard Foundation neMichigan State University ukuqeqesha abafundi abayi-185 ohlelweni lweminyaka eyisishiyagalolunye. Lesi sikhungo sithola amaRandi ayizigidi ezingama-45 njengoxhaso lwesikhwama.
Lolu hlelo luyatholakala kubafundi abayi-100 abenza iziqu kanye nabafundi abangama-85 beziqu ze-masters.
IZawadi Africa Education Fund Undergraduate Scholarship For Women- In Partnership With Google iphinde ibe ngesinye semifundaze e-USA yabafundi base-Afrika enikeza ukwesekwa kwamantombazane nabesifazane abavela ezizindeni ezihlwempu e-Afrika ababonise ubuhlakani obuphakeme ezifundweni ukuze baphishekele iziqu zabo. izinhlelo zeziqu e-USA, Ghana, Kenya, South Africa nase-Uganda.
Ithuba lenzelwe kakhulu izinhlelo zobunjiniyela bamakhompiyutha, isayensi yamakhompiyutha, kanye ne-ICT.
I-Haramble Fletcher Scholarships for African Students USA iphinde ibe phakathi kwezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika ezinikeza abaholi bezamabhizinisi e-Afrika ithuba lokuphishekela uhlelo lweziqu zabo ze-masters eFletcher School eTufts University.
Umfundaze uwumfundaze wezifundo ezigcwele, futhi uhlanganisa i-Master of Arts degree ku-Law and Diplomacy, idigri yeminyaka emibili ye-interdisciplinary and professional degree ezindabeni zamazwe ngamazwe, i-Master's degree in International Business, kanye nebhizinisi leminyaka emibili le-hybrid international.
I-Boustany Foundation- Izinhlelo ze-MBA Harvard scholarship nazo zingenye yezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika eziklomelisa abafundi abaneziqu ze-MBA njalo eminyakeni emibili.
Isisekelo sikholelwa ukuthi ukutshala imali kubantu kuwuhlobo olukhulu lokutshala imali, yingakho ukuhlinzeka kwabo ngezibonelelo ezahlukahlukene kanye nemifundaze kubafundi abafanelekile.
I-PEO International Peace Scholarships Yabesifazane- i-USA kanye neCanada ingenye yezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika enikeza abesifazane abakhethiwe abavela emazweni ahlukene ithuba lokufunda emazweni ahlangene naseCanada.
Iwuhlelo olwenzelwe ukusiza abesifazane ukuthi bafinyelele esicongweni semisebenzi yabo. Lo mfundaze uyatholakala kuma-Masters kanye ne-Ph.D. amadigri.
I-Immigration Journalism Fellowship In USA For International Students iphinde ibe ngesinye sezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika ezihlinzekwa yiFrench-American Foundation ngokusekelwa yiFord Foundation.
Lokhu kuhlanganyela kuhloswe ngakho ukusiza izintatheli zanoma ibuphi ubuzwe ukuthi zikhiqize umbiko wokufika nokuhlanganisa osezingeni eliphezulu kakhulu. Inani le-scholarship lilinganiselwa ku-$ 10,000. Umfundaze owenzelwe izintatheli ezineziqu ezinentshisekelo yokufudukela kwamanye amazwe kanye nokuhlanganiswa.
I-Gus Archie Undergraduate Scholarships- Society Of Petroleum Engineers (SPE) Foundation iphinde ibe ngesinye semifundaze e-USA yabafundi base-Afrika ehlinzekwa yi-Archie Fund ye-Society of Petroleum Engineers Foundation minyaka yonke.
Leli thuba ngelabafundi ababonise amandla aphezulu ezifundweni futhi abaphishekela iziqu ze-undergraduate program in Petroleum Engineering.
I-Google Lime Scholarship iphakathi kwemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika eyenzelwe ukusiza abakhubazekile kodwa abafuna ukuthola iziqu e-USA noma eCanada.
Iziqu ezixhaswe ngesayensi yekhompyutha, ubunjiniyela bamakhompiyutha, ubunjiniyela bezinhlelo zesoftware, njll. Ithuba ngelabo abathola iziqu, abaneziqu, kanye nePh.D. abafundi beziqu ngokulandelana.
Uhlelo lomfundaze we-inthanethi olwenziwa yi-US Bank USA nalo luphakathi kwemifundaze e-USA yabafundi base-Afrika okuhloswe ngayo ukusekela abafundi basezikoleni zamabanga aphezulu kanye nabafundi abenza iziqu.
Inani le-scholarship lilinganiselwa ku-$ 1000 ngonyaka. I-scholarship iyatholakala kubafundi be-undergraduate degree.
I-American University Merit Scholarships ingenye yezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika okuhloswe ngayo ukusiza abafundi abathola iziqu abaye babonisa ubuhlakani obuphezulu.
Kuyimfundaze exhaswa ngokugcwele ngenani elilinganiselwa ku-$6,000 kuya ku-$25,000 ngonyaka. I-scholarship inokuncintisana kakhulu futhi imiklomelo ikhethwa ngokusekelwe kumarekhodi aphezulu ezemfundo, ubuholi, izinsizakalo zomphakathi, ukuxhumana okuhle kakhulu ngesiNgisi, njll.
Umfundaze uvuselelwa minyaka yonke iminyaka emine yokufunda futhi uyayeka noma nini lapho ukufaneleka kokusebenza kwezemfundo kungafinyelelwa.
Lena imibuzo evame ukubuzwa mayelana nezifundo zase-USA zabafundi base-Afrika. Ngigqamise futhi ngaphendula ezimbalwa zazo.
Yebo kunjalo. Kunemifundaze eminingi exhaswa ngokugcwele ngabafundi bamazwe ngamazwe. Ezinye zazo zibalwe ngenhla kulesi sihloko.
Ukuba nesikolo se-SAT sika-1200 kuya ku-1600 kuzokubeka endaweni ephakeme ukuze uvikele imifundaze ethile ngokusekelwe ekuzuzeni.
I-Scholarship eNew York Yabafundi Bezizwe
Izifundiso Zabafundi BamaNdiya Ukuyofunda Kwamanye Amazwe
Izifundo Eziphezulu zeDiploma eKenya
Ama-Scholarship Ahamba Phambili Abafundi Base-Afrika Ukufunda Kwelinye Izwe
I-Best Fully Funded Government of Canadian Scholarships
Izikole Ezinhle Kakhulu Zobunjiniyela Emhlabeni NgeScholarship
Umbhali Wokuqukethwe kanye Nomklami at Study Abroad Nations | Bheka Ezinye Izihloko Zami
UJames ungumbhali, umcwaningi, kanye nomklami kwa-SAN. Ngenxa yocwaningo, usesize abafundi abaningi ukuthi bathole imvume yokwamukelwa kanye nemifundaze phesheya.
Unesifiso esivuthayo sokusiza izifundiswa zifinyelele esiqongweni samaphupho azo ezemfundo futhi akalokothi ayeke ukuhlinzeka ngolwazi olusebenzayo ukuze asize abafundi nganoma yisiphi isikhathi.
Ngaphandle kokubhala, uJames udala izixazululo zegraphic design ezisezingeni eliphezulu.
I-MBA eshibhe Kakhulu eku-inthanethi eyi-10 eNdiya
I-MBA eyi-10 eshibhile kakhulu e-UK Yabafundi Bamazwe Ngamazwe
I-MBA eyi-10 eshibhile kakhulu e-Australia Yabafundi Bamazwe Ngamazwe
I-10 ephezulu ye-MBA Scholarships e-Australia
Ukufunda Kwelinye Izwe NgeScholarship Umhlahlandlela Wokufunda Kwelinye Izwe I-United States Scholarship USA Scholarships
Post Previous:Izikole Ezinhle Kakhulu Eziyishumi E-Italy
Post Next:Amakilasi angu-15 aphezulu e-Pottery | Mahhala & Ikhokhelwa